ရန်ကုန်မြို့က စစ်အာဏာဖီဆန်တဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုမြင်ကွင်း။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၁)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့ အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ရှား ဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်ပြီးလုပ်နေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်ခွဲတွေကို ဒီနေ့မတ်လ ၈ ရက်နေ့ကစပြီး ပြန်ဖွင့်ဖို့ နိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က အကြောင်းကြားထားပေမဲ့ ဒီနေ့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေ အားလုံးဆက်ပြီး ပိတ်ထားကြပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ CDM လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါဝင်နေကြတာ၊ သွားရေးလာရေး အခက်အခဲရှိနေတာနဲ့ လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် ဘဏ်တွေ ပြန်ဖွင့်ဖို့ အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်နေသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းတွေလည်း CDM မှာ ပါဝင်နေကြတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်နေပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေမှာလည်း ဝန်ထမ်းတွေ CDM လုပ်နေကြတာမို့ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်နေကြပါတယ်။
အခုလိုအခြေအနေမှာပဲ CDM လှုပ်ရှားမှုကို ဆက်ပြီးလုပ်သွားမယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကခန့်အပ်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
"CDM တံခါး ကျနော် ပိတ်မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဘယ်တော့မှ မပိတ်တော့ပါဘူး။ အမြဲဖွင့်ထားမှာပါ။ ဝင်ချင်တဲ့သူ? အမှန်တရားဘက်ကို မြင်လာတဲ့သူတွေအတွက် တံခါးကို အမြဲတမ်းဖွင့်ထားမှာပါ။ မသိသားဆူးသွားမည်။ မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ အဓမ္မနဲ့ မတရားမှုကို သိရက်နဲ့၊ မကောင်းမှုကို သိရက်နဲ့ ထောက်ပံ့နေတဲ့သူတွေ၊ CDM မလုပ်တဲ့သူတွေကို ဖယ်ကျဉ်ထားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။"
ရုံးမတက်အာဏာဖီဆန်မှုမှာ ရဲတွေ၊ စစ်သားတွေ၊ သံတမန်တွေ ပိုပြီး ပါဝင်လာနေတယ်လို့ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက သူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ အသံဖိုင်ထဲမှာ ပြောထားပါတယ်။ ဆေးရုံတွေ၊ ကျောင်းတွေထဲကို စစ်တပ်တွေ ဝင်လေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်လေဖြစ်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ လောလောဆယ်ပါဝင်ဖို့ အခက်အခဲရှိနေကြသူတွေ ပါဝင်လာအောင် ဆက်ပြီး ဒီလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း နောက်အသံဖိုင်တခုမှာ ရှင်းပြထားပြီး CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်း ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း ထိပ်တိုက်မတွေ့ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြဖို့ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက တိုက်တွန်းပါတယ်။
"ပြည်သူအပေါင်းတို့နဲ့ Generation Z အပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ... အားလုံး လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ ရှေည်ကြဉ်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြကြပါ။ ထိပ်တိုက်မတွေ့ပါနဲ့။ သူတို့ဟာသူတို့ထားလိုက်ပါ။ သူတို့ဘာမှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အထိအခိုက်မခံပါနဲ့။"
စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတွေအတွင်း လုံခြုံရေးတွေလက်ချက်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက် ဝမ်းနည်းဂုဏ်ပြုတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ကာလကိုလည်း မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ကနေ April လ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ၁ လ သတ်မှတ်တယ်လို့ CRPH ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပြောပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ေ ပထမဆုံး သေဆုံးခဲ့တဲ့ မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ကို အမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့ ၁၂ နေ့က စပြီး သတ်မှတ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တလတာကာလအတွင်း အလံတိုင်တဝက်လွှင့်တာ၊ ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွေ၊ ဆုတောင်းပွဲတွေ၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လုပ်တာအပြင် အထိမ်းအမှတ် ကျောက်စာတိုင်တွေ စိုက်ထူကြမယ်လို့ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ပြောပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ထဲက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အာဏာသိမ်းယူ အုပ်ချုပ်နေတဲ့အပေါ် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေလည်း မြို့အနှံ့မှာ ဆက်ပြီးလုပ်နေကြသလို လုံခြုံတပ်ဖွဲ့တွေကလည်း ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုတွေ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။
ဒီနေ့မတ်လ ၈ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက မြစ်ကြီးနားမြို့ အောင်နန်းရပ်ကွက်က ဆန္ဒပြနေကြသူတွေကို လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးတွေ အင်အားသုံး ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲနေတဲ့ အသံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ်ခတ်မှုမှာ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် မောင်ဖိုးလုံး ခေါ် ကိုဇင်မင်းထက်နဲ့ အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ် ဦးကိုကိုလေး ခေါ် ဦးချိုတားတို့ ဦးခေါင်းတွေမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒဏ်ရာရသူ ၇ ယောက်ထက် မနည်းလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ ဦးကိုကိုလေး ခေါ် ဦးချိုတားကို ဒီနေ့ ညနေပိုင်းမှာပဲ အသုဘအခမ်းအနားလုပ်ခဲ့တာမှာ တော်တော်များများ လိုက်ပါ ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဖျာပုံမြို့မှာလည်း ဆန္ဒပြသူတွေကို ဒီနေ့ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုကြောင့် ၁ ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဖျာပုံမြို့မှာ ပစ်ခတ်မှုအတွင်း အသက် ၃၀ အရွယ် ကိုသီဟဦး သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးခဲ့သလို ၅ ယောက်အနည်းဆုံး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလို ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းသလို စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်တဲ့ ရုံးခန်းတွေကိုလည်း လုံခြုံရေးတွေ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး အကြမ်းဖက်တာတွေ လုပ်နေပါတယ်။
လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်က ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း (YESC) မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ဝန်ထမ်း ထောင်ကျော်က CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ပြီး ပြည်သူ့ရွေးကောက်ခံ အစိုးရပြန်တက်လာမှ အလုပ်ပြန်လုပ်မယ်လို့ ဒီနေ့ မတ်လ ၈ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအလုပ်က နုတ်ထွက်တာ မဟုတ်သလို၊ ပြည်သူအများရဲ့ ဆန္ဒကို လေးစားတဲ့အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်လို့ YESC ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီကြေညာချက်ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ထဲက လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးထဲကို ရဲတွေ အတင်းဝင်ရောက်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို ထိုးကြိတ်၊ ပစ္စည်းတွေ လုယူသွားတယ်လို့ ရန်ကင်းမြို့နယ် YESC က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း (YESC) မှာ တာဝန်ထမ်းနေတဲ့ ဝန်ထမ်း ၂,၀၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခုလို မင်္ဂလာတောင်ညွန့် လျှပ်စစ်ရုံးကို ဝင်ရောက်ဖျက်စီးသလို ရန်ကုန်မြို့ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ Myanmar Now သတင်းဌာနကိုလည်း ရဲနဲ့ စစ်တပ်အင်အား ရာဂဏန်း ဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီး Computer တွေ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ ယူသွားခဲ့ကြပါတယ်။
သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း ရုံးခန်းကိုလည်း ဒီနေ့ စစ်တပ်က ဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီး မီးခံသေတ္တာ၊ ကွန်ပြူတာနဲ့ ရုံးအသုံးအ​ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ယူသွားတယ်လို့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေက ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်ထောင်မြို့နယ် ၄၆ လမ်းထိပ်က လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တခုကိုလည်း ရဲတွေ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီးတော့ ဆိုင်မှာစားသောက်နေသူ ၁၀ ယောက်လောက်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်သွားပါတယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မုံရွာစတဲ့ မြို့ကြီးတွေက ဆေးရုံတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာလည်း စစ်တပ်တွေက ဝင်ရောက် တပ်စွဲထားကြပါတယ်။
စစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေက ခုလို အရပ်သားပြည်သူတွေအပေါ် အင်အားသုံး နှိမ်နင်း ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့ ပြည်သူတွေကတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေကို နိုင်ငံအနှံ့ မြို့တွေမှာ ဆက်လက်နေကြပါတယ်။ ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေက ထဘီအလံလွှင့် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသလို၊ အမျိုးသားတချို့ကလည်း ထဘီခေါင်းပေါင်းပြီး ထောက်ခံမှု ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
"ဒီနေ့ ဒီချိန်ထိ ကျနော်ဟာ ဒီလို လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ဒီထဘီရဲ့ ကျေးဇူးတွေ၊ ဒီထဘီရဲ့ ကျနော့်ဘဝမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီနေ့ထဘီဝတ်တဲ့ အမျိုးသမီးအားလုံးကို ကျနော်တို့ လက်ခုတ်တီးပြီးတော့ ဂုဏ်ပြုပေးကြရအောင်။"
ရန်ကုန်မြို့က နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထဘီအလံလွှင့် ဆန္ဒပြသူတယောက် ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဌာနကပေးတဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသမီးသူရဲကောင်းများ ဆုကို မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေ ကြား သင့်မြတ်မှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Wings Institute for Reconciliation အဖွဲ့တည်ထောင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ မဖြိုးဖြိုးအောင်လည်း ရရှိပါတယ်။ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို မကြာခင်အချိန်မှာပဲ Online ကနေ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken ကဦးဆောင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး သမ္မတကတော် Dr. Jill Biden က အထူးမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တချိန်ထဲမှာပဲ Australia နိုင်ငံက မြန်မာ့တပ်မတော်ကို အကူအညီပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ရပ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း တနင်္ဂနွေနေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marise Payne ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုပေးနေတဲ့ ဖွံဖြိုးရေးအထောက်အပံ့တွေကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာ အဆင်းရဲဆုံး တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ ထိခိုက်မှာမျိုးကိုတော့ သြစတြေးလျနိုင်ငံက လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။ အဲဒီအထောက်အပံ့တွေကို အစိုးရနဲ့ အစိုးရနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ပေးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်း မြန်မာစစ်တပ်ကို သြစတြေးလျက တိုက်ခိုက်ရေးမဟုတ်တဲ့ သင်တန်းတွေ၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသင်တန်းတွေကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျော်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ တနင်္ဂနွေနေ့က ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သြစတြေးလျလူမျိုး စီးပွားရေးပါမောက္ခ Sean Turnell သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပါအဝင် တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေ လွတ်မြောက်အရေးအတွက် တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Marise Payne က ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
CDM ကွောငျ့ ဘဏျနဲ့လုပျငနျးအမြားစု ပွနျမဖှငျ့နိုငျ
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးမှုဆနျ့ကငျြတဲ့ အကွမျးမဖကျ အာဏာဖီဆနျရေး CDM လှုပျရှား ဆန်ဒပွမှုတှေ ဆကျပွီးလုပျနကွေပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံတဝနျးမှာရှိတဲ့ ပုဂ်ဂလိက ဘဏျခှဲတှကေို ဒီနမေ့တျလ ၈ ရကျနကေ့စပွီး ပွနျဖှငျ့ဖို့ နိုငျငံတျော ဗဟိုဘဏျက အကွောငျးကွားထားပမေဲ့ ဒီနေ့ ပုဂ်ဂလိကဘဏျတှေ အားလုံးဆကျပွီး ပိတျထားကွပါတယျ။ ဝနျထမျးတှေ CDM လှုပျရှားမှုထဲမှာ ပါဝငျနကွေတာ၊ သှားရေးလာရေး အခကျအခဲရှိနတောနဲ့ လုံခွုံရေးအခွအေနတှေကွေောငျ့ ဘဏျတှေ ပွနျဖှငျ့ဖို့ အခကျအခဲရှိနတေယျလို့ ဘဏျလုပျငနျးလုပျနသေူတှကေ ပွောပါတယျ။ ဆရာဝနျနဲ့ ဆေးဝနျထမျးတှေ၊ အငျဂငျြနီယာတှေ၊ လြှပျစဈဝနျထမျးတှလေညျး CDM မှာ ပါဝငျနကွေတဲ့အတှကျ လုပျငနျးတှေ ထိခိုကျနပေါတယျ။ ပုဂ်ဂလိကပိုငျ စကျရုံ၊ အလုပျရုံတှမှောလညျး ဝနျထမျးတှေ CDM လုပျနကွေတာမို့ လုပျငနျးတှေ ရပျနကွေပါတယျ။
အခုလိုအခွအေနမှောပဲ CDM လှုပျရှားမှုကို ဆကျပွီးလုပျသှားမယျလို့ ပွညျထောငျစုလှတျတျော ကိုယျစားပွုကျောမတီ CRPH ကခနျ့အပျထားတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာဇျောဝစေိုးက ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်ရော၊ နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ အဖြစ်နဲ့ပါ ကလေးမြို့မှာ မတ်လ ၈ ရက်နေ့ လူထုချီတက်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းများ။
စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်ရော၊ နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ အဖြစ်နဲ့ပါ ကလေးမြို့မှာ မတ်လ ၈ ရက်နေ့ လူထုချီတက်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းများ။ ~~~ စဈအာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေးအတှကျရော၊ နိုငျငံတကာအမြိုးသမီးမြားနေ့ အဖွဈနဲ့ပါ ကလေးမွို့မှာ မတျလ ၈ ရကျနေ့ လူထုခြီတကျပှဲ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ မွငျကှငျးမြား။
"CDM တံခါး ကနြျော ပိတျမယျလို့ ပွောခဲ့တယျ။ ဘယျတော့မှ မပိတျတော့ပါဘူး။ အမွဲဖှငျ့ထားမှာပါ။ ဝငျခငျြတဲ့သူ? အမှနျတရားဘကျကို မွငျလာတဲ့သူတှအေတှကျ တံခါးကို အမွဲတမျးဖှငျ့ထားမှာပါ။ မသိသားဆူးသှားမညျ။ မကျြစိမှိတျပွီးတော့ အဓမ်မနဲ့ မတရားမှုကို သိရကျနဲ့၊ မကောငျးမှုကို သိရကျနဲ့ ထောကျပံ့နတေဲ့သူတှေ၊ CDM မလုပျတဲ့သူတှကေို ဖယျကဉျြထားရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။"
ရုံးမတကျအာဏာဖီဆနျမှုမှာ ရဲတှေ၊ စဈသားတှေ၊ သံတမနျတှေ ပိုပွီး ပါဝငျလာနတေယျလို့ ဒေါကျတာဇျောဝစေိုးက သူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ တငျထားတဲ့ အသံဖိုငျထဲမှာ ပွောထားပါတယျ။ ဆေးရုံတှေ၊ ကြောငျးတှထေဲကို စဈတပျတှေ ဝငျလေ၊ ဝနျထမျးတှေ CDM လှုပျရှားမှုမှာ ပါဝငျလဖွေဈတယျလို့ သူကပွောပါတယျ။ CDM လှုပျရှားမှုမှာ လောလောဆယျပါဝငျဖို့ အခကျအခဲရှိနကွေသူတှေ ပါဝငျလာအောငျ ဆကျပွီး ဒီလှုပျရှားမှုကို လုပျသှားမှာဖွဈကွောငျးလညျး နောကျအသံဖိုငျတခုမှာ ရှငျးပွထားပွီး CDM မှာပါဝငျနကွေတဲ့ဝနျထမျးတှလေညျး ကြေးဇူးတငျ ဂုဏျပွုကွောငျး ပွောကွားထားပါတယျ။ စဈအာဏာရှငျစနဈကို ဆနျ့ကငျြ ကနျ့ကှကျ ဆန်ဒပွပွညျသူတှအေနနေဲ့လညျး ထိပျတိုကျမတှေ့ဘဲ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွဖို့ ဒေါကျတာဇျောဝစေိုးက တိုကျတှနျးပါတယျ။
"ပွညျသူအပေါငျးတို့နဲ့ Generation Z အပေါငျးတို့ ခငျဗြာ... အားလုံး လိမ်မာပါးနပျစှာနဲ့ ရှညျေကွဉျပွီးတော့ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွကွပါ။ ထိပျတိုကျမတှပေ့ါနဲ့။ သူတို့ဟာသူတို့ထားလိုကျပါ။ သူတို့ဘာမှ ဖွဈမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ အထိအခိုကျမခံပါနဲ့။"
စဈအာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေးဆန်ဒပွတှအေတှငျး လုံခွုံရေးတှလေကျခကျြကွောငျ့ သဆေုံးခဲ့ရသူတှအေတှကျ ဝမျးနညျးဂုဏျပွုတဲ့ အထိမျးအမှတျကာလကိုလညျး မတျလ ၁၂ ရကျနကေ့နေ April လ ၁၁ ရကျနအေ့ထိ ၁ လ သတျမှတျတယျလို့ CRPH ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အစိုးရဝနျကွီးအဖှဲ့ဝငျ ဒေါကျတာဇျောဝစေိုးက ပွောပါတယျ။ နပွေညျတျောမှာ သနေတျဒဏျရာနဲ့ေ ပထမဆုံး သဆေုံးခဲ့တဲ့ မမွသှဲ့သှဲ့ခိုငျသဆေုံးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၂ ရကျနကေို့ အမှတျရတဲ့အနနေဲ့ ၁၂ နကေ့ စပွီး သတျမှတျတယျလို့ ပွောပါတယျ။ တလတာကာလအတှငျး အလံတိုငျတဝကျလှငျ့တာ၊ ဝမျးနညျးခွငျး အထိမျးအမှတျ အခမျးအနားတှေ၊ ဆုတောငျးပှဲတှေ၊ ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ လုပျတာအပွငျ အထိမျးအမှတျ ကြောကျစာတိုငျတှေ စိုကျထူကွမယျလို့ ဒေါကျတာဇျောဝစေိုးက ပွောပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနထေဲ့က တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက အာဏာသိမျးယူ အုပျခြုပျနတေဲ့အပျေါ ဆနျ့ကငျြဆန်ဒပွမှုတှလေညျး မွို့အနှံ့မှာ ဆကျပွီးလုပျနကွေသလို လုံခွုံတပျဖှဲ့တှကေလညျး ပဈခတျဖွိုခှဲမှုတှေ ဆကျလုပျနပေါတယျ။
ဒီနမေ့တျလ ၈ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးက မွဈကွီးနားမွို့ အောငျနနျးရပျကှကျက ဆန်ဒပွနကွေသူတှကေို လကျနကျကိုငျလုံခွုံရေးတှေ အငျအားသုံး ပဈခတျဖွိုခှဲနတေဲ့ အသံတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီပဈခတျမှုမှာ အသကျ ၂၃ နှဈအရှယျ မောငျဖိုးလုံး ချေါ ကိုဇငျမငျးထကျနဲ့ အသကျ ၆၂ နှဈအရှယျ ဦးကိုကိုလေး ချေါ ဦးခြိုတားတို့ ဦးခေါငျးတှမှော သနေတျဒဏျရာတှနေဲ့ သဆေုံးခဲ့ကွပါတယျ။ ဒဏျရာရသူ ၇ ယောကျထကျ မနညျးလညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။ အစ်စလာမျဘာသာဝငျဖွဈတဲ့ ဦးကိုကိုလေး ချေါ ဦးခြိုတားကို ဒီနေ့ ညနပေိုငျးမှာပဲ အသုဘအခမျးအနားလုပျခဲ့တာမှာ တျောတျောမြားမြား လိုကျပါ ပို့ဆောငျ နှုတျဆကျခဲ့ကွပါတယျ။
ဖြာပုံမွို့မှာလညျး ဆန်ဒပွသူတှကေို ဒီနေ့ ပဈခတျနှိမျနငျးမှုကွောငျ့ ၁ ယောကျသဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
ဖြာပုံမွို့မှာ ပဈခတျမှုအတှငျး အသကျ ၃၀ အရှယျ ကိုသီဟဦး သနေတျဒဏျရာနဲ့ သဆေုံးခဲ့သလို ၅ ယောကျအနညျးဆုံး ဒဏျရာရခဲ့ကွပါတယျ။ အခုလို ဆန်ဒပွသူတှအေပျေါ ပဈခတျနှိမျနှငျးသလို စဈအာဏာသိမျးမှု ဆနျ့ကငျြလှုပျရှားမှုမှာ ပါဝငျတဲ့ ရုံးခနျးတှကေိုလညျး လုံခွုံရေးတှေ ဝငျရောကျဖကျြဆီး အကွမျးဖကျတာတှေ လုပျနပေါတယျ။
လြှပျစဈနဲ့ စှမျးအငျ ဝနျကွီးဌာနလကျအောကျက ရနျကုနျလြှပျစဈဓါတျအားပေးရေးကျောပိုရေးရှငျး (YESC) မှာ တာဝနျထမျးဆောငျနကွေတဲ့ ဝနျထမျး ထောငျကြျောက CDM လှုပျရှားမှုမှာ ပါဝငျပွီး ပွညျသူ့ရှေးကောကျခံ အစိုးရပွနျတကျလာမှ အလုပျပွနျလုပျမယျလို့ ဒီနေ့ မတျလ ၈ ရကျနေ့ နစှေဲ့နဲ့ ကွညောခကျြထုတျပွနျပါတယျ။ ပွညျသူ့ဝနျထမျးအလုပျက နုတျထှကျတာ မဟုတျသလို၊ ပွညျသူအမြားရဲ့ ဆန်ဒကို လေးစားတဲ့အနနေဲ့ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒထုတျဖျောတာဖွဈတယျလို့ YESC ထုတျပွနျခကျြမှာ ရေးထားပါတယျ။ အဲဒီကွညောခကျြထှကျလာခဲ့ပွီးနောကျ ရနျကုနျတိုငျး မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မွို့နယျထဲက လြှပျစဈမနျနဂြောရုံးထဲကို ရဲတှေ အတငျးဝငျရောကျပွီး ဝနျထမျးတှကေို ထိုးကွိတျ၊ ပစ်စညျးတှေ လုယူသှားတယျလို့ ရနျကငျးမွို့နယျ YESC က ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ရနျကုနျလြှပျစဈဓါတျအားပေးရေးကျောပိုရေးရှငျး (YESC) မှာ တာဝနျထမျးနတေဲ့ ဝနျထမျး ၂,၀၀၀ လောကျရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
ခုလို မင်ျဂလာတောငျညှနျ့ လြှပျစဈရုံးကို ဝငျရောကျဖကျြစီးသလို ရနျကုနျမွို့ ပနျးပဲတနျးမွို့နယျထဲမှာရှိတဲ့ Myanmar Now သတငျးဌာနကိုလညျး ရဲနဲ့ စဈတပျအငျအား ရာဂဏနျး ဝငျရောကျရှာဖှပွေီး Computer တှေ၊ စာရှကျစာတမျးတှေ ယူသှားခဲ့ကွပါတယျ။
သင်ျဃနျးကြှနျး မွို့နယျထဲမှာရှိတဲ့ ၈၈ မြိုးဆကျငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ ပှငျ့လငျး လူ့အဖှဲ့အစညျး ရုံးခနျးကိုလညျး ဒီနေ့ စဈတပျက ဝငျရောကျရှာဖှပွေီး မီးခံသတ်ေတာ၊ ကှနျပွူတာနဲ့ ရုံးအသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှေ ယူသှားတယျလို့ ၈၈ မြိုးဆကျတှကေ ပွောပါတယျ။ ဗိုလျထောငျမွို့နယျ ၄၆ လမျးထိပျက လ်ဘကျရညျဆိုငျတခုကိုလညျး ရဲတှေ ဝငျရောကျဖကျြဆီးပွီးတော့ ဆိုငျမှာစားသောကျနသေူ ၁၀ ယောကျလောကျကို ဖမျးဆီးချေါသှားပါတယျ။ ရနျကုနျ၊ မန်တလေး၊ မုံရှာစတဲ့ မွို့ကွီးတှကေ ဆေးရုံတှေ၊ တက်ကသိုလျတှထေဲမှာလညျး စဈတပျတှကေ ဝငျရောကျ တပျစှဲထားကွပါတယျ။
စဈတပျနဲ့ ရဲတှကေ ခုလို အရပျသားပွညျသူတှအေပျေါ အငျအားသုံး နှိမျနငျး ဖမျးဆီးမှုတှလေုပျနပေမေဲ့ ပွညျသူတှကေတော့ စဈအာဏာရှငျစနဈဆနျ့ကငျြတဲ့ ဆန်ဒပွမှုတှကေို နိုငျငံအနှံ့ မွို့တှမှော ဆကျလကျနကွေပါတယျ။ ဒီနကေ့ရြောကျတဲ့ နိုငျငံတကာ အမြိုးသမီးမြားနေ့ အထိမျးအမှတျအဖွဈ မွနျမာနိုငျငံက အမြိုးသမီးတှကေ ထဘီအလံလှငျ့ ဆန်ဒပွခဲ့ကွသလို၊ အမြိုးသားတခြို့ကလညျး ထဘီခေါငျးပေါငျးပွီး ထောကျခံမှု ပွသခဲ့ကွပါတယျ။
"ဒီနေ့ ဒီခြိနျထိ ကနြျောဟာ ဒီလို လူတယောကျဖွဈလာတယျဆိုတာ ဒီထဘီရဲ့ ကြေးဇူးတှေ၊ ဒီထဘီရဲ့ ကနြေျာ့ဘဝမှာ ပါဝငျပတျသကျမှုတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ဒီနထေ့ဘီဝတျတဲ့ အမြိုးသမီးအားလုံးကို ကနြျောတို့ လကျခုတျတီးပွီးတော့ ဂုဏျပွုပေးကွရအောငျ။"
ရနျကုနျမွို့က နိုငျငံတကာ အမြိုးသမီးမြားနေ့ အထိမျးအမှတျ ထဘီအလံလှငျ့ ဆန်ဒပွသူတယောကျ ပွောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျပွညျထောငျစု နိုငျငံခွားရေးဌာနကပေးတဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈအတှကျ အမြိုးသမီးသူရဲကောငျးမြား ဆုကို မွနျမာနိုငျငံက တိုငျးရငျးသားလူငယျတှေ၊ ဘာသာရေးအဖှဲ့တှေ ကွား သငျ့မွတျမှုရရှိအောငျ ဆောငျရှကျနတေဲ့ Wings Institute for Reconciliation အဖှဲ့တညျထောငျသူတယောကျဖွဈတဲ့ မဖွိုးဖွိုးအောငျလညျး ရရှိပါတယျ။ ဆုပေးပှဲအခမျးအနားကို မကွာခငျအခြိနျမှာပဲ Online ကနေ ကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီအခမျးအနားကို အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Antony Blinken ကဦးဆောငျကငျြးပမှာဖွဈပွီး သမ်မတကတျော Dr. Jill Biden က အထူးမိနျ့ခှနျးပွောကွားမှာဖွဈပါတယျ။
တခြိနျထဲမှာပဲ Australia နိုငျငံက မွနျမာ့တပျမတျောကို အကူအညီပေးနတေဲ့ အစီအစဉျတှကေို ရပျလိုကျကွောငျး ကွညောခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာစဈတပျနဲ့ ထိတှဆေ့ကျဆံရေးကို ပွနျလညျသုံးသပျခဲ့ပွီး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုအားလုံးကို ရပျဆိုငျးလိုကျကွောငျး တနင်ျဂနှနေကေ့ ထုတျပွနျကွညောခဲ့တယျလို့ သွစတွေးလနြိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Marise Payne ကပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံကိုပေးနတေဲ့ ဖှံဖွိုးရေးအထောကျအပံ့တှကေိုလညျး ပွနျလညျသုံးသပျနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အာဆီယံအဖှဲ့ထဲမှာ အဆငျးရဲဆုံး တနိုငျငံဖွဈတဲ့မွနျမာနိုငျငံက ပွညျသူတှေ ထိခိုကျမှာမြိုးကိုတော့ သွစတွေးလနြိုငျငံက လုပျမှာ မဟုတျဘူးလို့ သွစတွေးလနြိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးက ပွောပါတယျ။ အဲဒီအထောကျအပံ့တှကေို အစိုးရနဲ့ အစိုးရနဲ့ပါတျသကျတဲ့ လုပျငနျးတှကေို ပေးတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၅ နှဈအတှငျး မွနျမာစဈတပျကို သွစတွေးလကြ တိုကျခိုကျရေးမဟုတျတဲ့ သငျတနျးတှေ၊ အင်ျဂလိပျစာသငျတနျးတှေ ပေးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီသငျတနျးတှကေို အမရေိကနျဒျေါလာ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကြျောသုံးစှဲခဲ့တယျလို့ တနင်ျဂနှနေကေ့ ထုတျပွနျခကျြမှာ ပွောထားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ သွစတွေးလလြူမြိုး စီးပှားရေးပါမောက်ခ Sean Turnell သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့၊ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့အပါအဝငျ တရားလကျလှတျဖမျးဆီးခံထားရသူတှေ လှတျမွောကျအရေးအတှကျ တခွားနိုငျငံတှနေဲ့ ဆှေးနှေးဆောငျရှကျနတေယျလို့လညျး သွစတွေးလနြိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Marise Payne က ဒီနသေ့တငျးစာရှငျးပှဲမှာ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။